Go'aanka Ay Liverpool Ka Gaadhay Matthijs de Ligt Oo Sabab U Noqonaya In Doorashadiisu Laba Sooxood Iskugu Soo Hadhay. - Gool24.Net
Kooxaha Yurub ugu waa wayn ayaa wali rajo ka qaba in ay la soo saxiixdaan kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt laakiin xaalada horumar la’aanta noqotay ee uu dhexda ugu jiro wakiilkiisa Mino Raiola ayaa wax badan sii xumaysay.
Kooxda Liverpool ayaa go’aan ka gaadhay in ayna xagaagan la soo saxiixan Matthijs de Ligt waxayna arintani keentay in xidiga reer Holland uu hadda doorashadiisa laba kooxood ku soo koobayo.
Matthijs de Ligt ayaa xidhiidh fiican garoonka dhexdiisa iyo banaankiisa kula leh Virgil Van Dijk oo Liverpool koobka Champions league kula soo guulaystay, waxaana markii hore loo arkayay in ay Reds fursadan kooxaha kale dheer tahay.
Laakiin saamaynta wakiilka De Ligt ee Mino Raiola ayaa xaalada Matthijs de Ligt ka dhigtay mid ay kooxo badani iskaga bixi karaan xiisaha ay 19 sano jirkan ku doonayaan.
Kooxaha Real Madrid, Juventus, Bayern Munich iyo Manchester United ayaa dhamaantood hadda Liverpool kula biiri kara in ay ka baxaan tartanka Matthijs de Ligt maadaama oo uu doorashadiisa ku soo koobayo laba kooxood oo kaliya.
Barcelona ayaa waqti ahayd kooxda ugu cad cad ee la filayay in uu Matthijs de Ligt ku biirayo laakiin wakiilkiisa Raiola ayaa kubbad adag la ciyaaraya kooxaha yurub wuxuuna iska diiday in hal koox loo saadaaliyo saxiixa Matthijs de Ligt isaga oo wali doonaya in tartanku uu sii socdo.
Laakiin wararkii ugu danbeeyay ee xaalada Matthijs de Ligt ayaa sheegaya in ka bixista Liverpool ee tartankiisu ay hadda u sahlayso in kala badh uu go’aankiisa gaadhayo maadaama oo uu kala dooranayo kooxaha Barcelona iyo PSG.
Qaar ka mid ah taageerayaasha Liverpool ayaa aaminsan in De ligt aanu ka fiicnayn Joe Gomez kaas oo bilawgii xili ciyaareedkii la soo dhaafay bandhig layaableh la sameeyay Van Dijk oo uu difaaca dhexe kala ciyaarayay.
Kooxda PSG ayaa maalmihii ugu danbeeyay ahayd kooxda ugu cad cad ee ku guulaysan karta saxiixa De Ligt kadib markii ay maamulka Paris isku taageen in ay lacag waali ah u soo bandhigaan wakiilkiisa Mino Raiola.
Inkasta oo uu Matthijs de Ligt ku dooday in ayna lacagtu dhibaatadiisa ahayn, haddana waxa uu hawsha mustaqbalkiisa u xil saaray Mino Raiola oo ah wakiil lacagta iyo wada xaajoodkeeda aad ugu adag.
Si kastaba ha ahaatee, xaalada Matthijs de Ligt ayaa hadda ku soo ururtay kooxaha PSG iyo Barcelona waxaana la filayaa in dhamaan kooxaha kale ay ka bixi doonaan.